Ukumkanikazi Olubomvu, ifestile yokuya ku-Antonia Scott | Uncwadi lwangoku
Ukumkanikazi Olubomvu yimincili ebhalwe nguJuan Gómez-Jurado waseSpain. Le ncwadi yapapashwa ngo-Novemba ngo-2018 kwaye sisiqalo sokuqala se-trilogy ebalisa ngeziganeko zika-Antonia Scott. Ungumfazi onomdla onobukrelekrele obumangalisayo, othi ngaphandle kokuba lipolisa asombulule ubugebenga obuninzi. Nangona kunjalo, iimeko ezithile ziye zamkhokelela ekubeni aphile ubomi bodwa.
Imfihlo ka-Antonia iyatshintsha ngenxa yokungenelela kwepolisa uJon Gutiérrez, okwaziyo ukumkhupha eluvalelweni ukuze enze uphando kunye. Yile ndlela ibali elingaqhelekanga nelimangalisayo elivelela kuyo yonke idolophu yaseMadrid. Ke, Ukumkanikazi Olubomvu kuzwelonke nakumazwe angcwelise umbhali wayo ngeekopi ezingaphezu kwama-250.000 ezithengisiweyo.
1 Malunga nombhali, uJuan Gómez-Jurado
1.1 Umsebenzi woncwadi kunye nokudunyiswa
1.2 Tsibela kwinkwenkwezi
1.3 Iincwadi zabantwana nolutsha
1.3.1 Imisebenzi yabantwana
1.4 Imisebenzi yeendaba
2 Uhlalutyo lweKumkanikazi ebomvu
2.1 Ukumkanikazi Olubomvu
2.2 UAntonia scott
2.3 UJon Gutierrez
2.4 Uphando lokuqala
2.6 Ukukhangela kuyaqala
Malunga nombhali, uJuan Gómez-Jurado
NgoLwesihlanu, nge-16 kaDisemba, 1977, wazalelwa eMadrid UJuan Gómez-Jurado. Ufumene isidanga sakhe seBachelor kwiNzululwazi ngezoLwazi kwiYunivesithi iECU San Pablo. Ngokulinganayo, Uzakhele umsebenzi wokuba yintatheli kwimithombo yeendaba zaseSpain ezinje nge Umsele +, iRadio Spain, ABC, COPE Umtya kwaye yathatha inxaxheba kwiimagazini Yintoni onokuyifunda, iNew York Times Book Review kunye neJot Down.
Umsebenzi woncwadi kunye nokudunyiswa
UGómez-Jurado ngumbhali obalaseleyo kuhlobo oluvuselelayo, imisebenzi yakhe yokuqala yayi: Iintlola zikathixo (2006) Isivumelwano nothixo (2007) kunye Umfuziselo woMngcatshi (2008). Lo msebenzi wokugqibela-uphefumlelwe libali eliyinyani kwaye useti kwiJamani yamaNazi- wawufanelekile IsiXeko seTorrevieja Inoveli Award.
Emva kweminyaka emi-4, umbhali waqhubeka nomsebenzi wakhe kunye neenoveli: Igosa lesela (2012) Isigulana (2014) Imbali efihlakeleyo kaMnu White (2015) kunye Ubomvu (2015). Le ncwadi yokugqibela, njenge Umfuziselo woMngcatshi, yayiphakathi kwabathengisi abaphambili kwifomathi yedijithali ngaphakathi Iqonga leAmazon ngexesha leminyaka ka-2011 kunye no-2016.
Kwi-2018, uGómez-Jurado wabonisa umdla Ukumkanikazi Olubomvu ukuqala i-trilogy ka-Antonia Scott, umlinganiswa wokuqala othimbe amakhulu abafundi. Ukuhanjiswa Ingcuka emnyama (2019) kunye Inkosi emhlophe (2020) yaqhubeka impumelelo yale. Olu luhlu lwenze ukuba umbhali abe ngumthengisi othengisayo ongaphezulu kwe-1.200.000 Iikopi ezifunyenwe ngabafundi bakhe, ezibonisa ukuba ungomnye wabadlali abaphambili bohlobo olo.
Iincwadi zabantwana nolutsha
Isuka 2016, UJuan Gómez-Jurado uxakeke kwi uncwadi lwabantwana, ngokukodwa kwiintlobo ze adventure kunye nemfihlakalo. Waqala umsebenzi wakhe ngothotho ezimbini: UAlex Colt y Rexcatators. Kokugqibela, umbhali wabelana ngokubhala nesazi ngengqondo yomntwana uBárbara Montes.
Imifanekiso yezi tekisi zabantwana yenziwe nguFran Ferriz. Ngo-2021, uGómez-Jurado uqala uthotho olutsha kunye neMontes ebalisa ibali lokufikisa kukaAmanda Black. Ikopi yokuqala ibizwa ngegama Ilifa Eliyingozi.
Uthotho lweAlex Colt:
I-cadet yendawo (2016).
Idabi laseGanymede (2017).
Imfihlelo yeZark (2018).
Umcimbi omnyama (2019).
UMlawuli waseAntares (2020).
Imfihlakalo yePunta Escondida (2017).
Imigodi yentshabalalo (2018).
Ibhotwe elingaphantsi kwamanzi (2019).
Ilifa Eliyingozi (2021).
Kumsebenzi wakhe kwimithombo yeendaba emanyelwayo, ibalaselisa ukuthatha kwabo inxaxheba iminyaka emi-4 ilandelelana (2014-2018) kwisikhululo sikanomathotholo saseSpain Onda Cero. Apho, kunye noRaquel Martos, wabonisa icandelo "laBantu" lephephancwadi Julia upholile. Ngo-2017, kunye noArturo González, waqhuba le nkqubo: ICinemascopazo, eyadluliselwa nge YouTube.
Ngokunjalo, ungene kwihlabathi le-podcasting, ngeeprojekthi zenkcubeko ezimbini: Somandla y Nazi iidragons. Kuzo zombini wabelana ngemakrofoni ukusuka ekuqaleni ukuza kuthi ga namhlanje kunye noRodrigo Cortés, Arturo González-Campos noJavier Cansado. Ngo-2021, Waqala njengomsasazi kamabonakude I-flux capacitor, Inkqubo yembali kwisitishi 2 de I-TVE.
Uhlalutyo Ukumkanikazi Olubomvu
Ukumkanikazi Olubomvu yinoveli yolwaphulo-mthetho esekwe eMadrid, apho iimvakalelo ezinkulu zifunyanwa ngelixa kuqweqwediswa kusonjululwa. Kwisiqwenga, u-Antonia noJon bajoyina imikhosi kuphando amanye amatyala abandakanya iintsapho ezimbini zoluntu oluphezulu lwaseSpain. Umgca webali ngalinye uboniswa ngendlela entsha, ngencoko yababini elula kunye nezahluko ezifutshane ezibamba umfundi kwangoko.
Ukumkanikazi Olubomvu (iyelenqe)
UKumkanikazi Olubomvu yiprojekthi yaseYurophu enikezelwe kuphando lolwaphulo-mthetho, Yenzelwe ukusombulula iimeko ezizodwa ngokubona okupheleleyo nangaphandle komthetho. Eli candelo liyimfihlo linodumo olukhulu, kwaye ulawula imisebenzi yabo ngokudibeneyo namaqela amapolisa kwiYurophu iphela, UAntonia Scott uyinxalenye yalo mbutho.
U-Antonia, umfazi onesiphiwo, 2 kwiminyaka eyadlulayo ukude nomsebenzi wakhe kunye nehlabathi lokwenyani. Le meko kungenxa yoxinzelelo olukhulu ukukhuthazwa yimvakalelo yokuziva unetyala elingena kuye, emva kwengozi kaMarcos -ndoda yakhe- ngubani oqulekile esibhedlele.
Umhloli uGutiérrez lipolisa elikhutheleyo ngaphezulu kweminyaka engama-40 -obufanasini-. Uvela kwilizwe laseBasque, enomzimba owomeleleyo ngenxa yokuthanda ukuphakamisa ubunzima; Ukongeza, unoburharha. Nangona uJon lipolisa elinyanisekileyo, Okwangoku unqunyanyisiwe kwisikhundla sakhe kutyholwa ukuba ubandakanyekile izenzo ezingekho mthethweni.
Ekuqaleni, UAntonia noJon kufuneka bafumanise ukuba yintoni ebangela ukubulawa kuka-vlvaro Trueba, unyana womlawuli webhanki eyaziwayo yaseSpain.. Indlalifa encinci yahlala ilahlekile kangangeentsuku ezininzi kwaye kamva yafunyanwa iswelekile kwidolophu ekhethekileyo eMadrid. Njengokuba u-Antonia noJon bengena kuphando, baphazanyiswa kukuthathwa kwelinye ibhinqa elisisityebi.
Eli bali libonisa ukuthinjwa kukaCarla, oyintombi kaRamón Ortiz, usomashishini waseGalician wayejongwa njengoyena mntu usisityebi ehlabathini. UCarla ubalekela emsebenzini wakhe kwinkampani eyolukiweyo yosapho, emva kokungabinabo ubudlelwane obuhle notata wakhe kunye nomzali wakhe. Ngelixa uphando lusaphuhliswa, iinkcukacha ngobomi bakhe bobuqu zityhilwe, eziya kuthi zibonelele ngemikhondo ebalulekileyo kwimeko leyo.
UJon Gutiérrez ngumcuphi owathi, nangona wayenomsebenzi ogqibeleleyo, usandula ukubandakanyeka kwisenzo senkohlakalo. Kule nkqubo, UGutiérrez uqhakamshelana nomntu ongaqondakaliyo, ophakamisa umsebenzi: ukufuna u-Antonia Scott kwaye umkhuphe eluvalelweni. Ukubuya, uthembisa ukukunceda ucoce umsebenzi wakho.
Emva kokwamkela isithembiso, umhloli uqala uhambo lwakhe oluya eLavapiés, indawo ahlala kuyo uAntonia. Apho, kufuneka amqinisekise ukuba asebenze kunye, umsebenzi ongazukubakho lula, kuba utyhafile. Ngaphandle kokudideka, uJon uyakwazi ukumqinisekisa; kwaye ngokuzisa ityala lika-Trueba, uvusa umoya wakhe wamapolisa.
Njengoko imibuzo malunga namatyala iqhubeka, Ubudlelwane phakathi kuka-Antonia noJon buhamba ngamanqanaba aliqela, oku kungenxa yokuba banobuntu obahluke ngokupheleleyo, kodwa oko kugqibela ngokuhambelana. Ngokunjalo, uphando luya kwenzeka luzele iimfihlakalo kunye nobunzima, apho iprofayili yamaxhoba ihambelana kwaye iya kuphakamisa into engaziwayo, ngaba iya kuba ngumenzi wobubi ofanayo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Inoveli emnyama » Ukumkanikazi Olubomvu
IMarquis yaseSantillana. Isikhumbuzo sokufa kwakhe. Imibongo